Tragbọ oloko ụgbọ oloko abụọ gbakọrọ na ọwara Kuala Lumpur, ndị njem 213 merụrụ ahụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa Malaysia » Tragbọ oloko ụgbọ oloko abụọ gbakọrọ na ọwara Kuala Lumpur, ndị njem 213 merụrụ ahụ
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ na -agbasa Malaysia • News • Rail njem • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Transportation • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
N'ihe dị ka elekere 8:33 nke mgbede oge, ụgbọ oloko ụgbọ oloko na-efu efu na onye ọzọ bu mmadụ 232 kụrụ ụzọ n'okpuru ọdụ KLCC.
Mịnịsta na-ahụ maka njem na Malaysia Wee Ka Siong kwuru na ọdachi ahụ wutere ya
E guzobela kọmitii nyocha pụrụ iche nke Ministri Transportgbọ njem na-eduzi
Ihe mbụ merenụ na LRT Kelana Jaya akara afọ iri abụọ na atọ
Ndị njem ụgbọ oloko 166 nwere obere mmerụ ahụ, ebe ndị mmadụ 47 gbagara n'ụlọ ọgwụ na ọnọdụ dị njọ mgbe ụgbọ oloko ụgbọ oloko abụọ dabara na isi obodo Malaysia nke Kuala Lumpur na mgbede Mọnde.
Malaysia nwere Ozi nke Transportgbọ njem enyela iwu ka e mee nchọpụta banyere ihe mberede ahụ butere ihe ruru mmadụ 213. Enweghị ọnwụ ọ bụla akuko n'oge a.
Ihe onyonyo e sere na otu ụgbọ oloko ahụ mgbe ihe mberede ahụ mechara, gosiri iko gbajiri agbaji na ndị njem nọ na obi erughị ala, ụfọdụ n'ime ha yiri ka ndị ọbara juru.
Mịnịsta na-ahụ maka njem na Malaysia Wee Ka Siong kwuru na nwute a wutere ya, bụ nke ọ kọwara dị ka nke mbụ ụdị ihe ahụ mere na afọ 23 nke LRT Kelana Jaya.
Wee kwukwara na eguzobela kọmitii nyocha pụrụ iche nke Mịnịstrị na-ahụ maka ationgbọ njem na-eduzi, ebe Publiclọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọha na Ala na-achịkọta akụkọ gbasara ọrụ na ihe ahụ mere.
Prime Minista mba ahụ bụ Muhyiddin Yassin kwuru na ya akpọọla oku maka nyocha ma kwuo na "a ga-eme ihe siri ike ozugbo" na nzaghachi nke nkwekọrịta ahụ.